7 ọkachamara ọkachamara na ihe eCommerce Manager ga-enwerịrị | ECommerce ozi ọma
7 ọkachamara ọkachamara nke onye njikwa eCommerce ga-enwerịrị
Onu ogugu nke ecommerce amaghi nke oma na Spain. Agbanyeghị, ọ bụ otu ihe dị mkpa nke chọrọ usoro ọkachamara iji rụọ ọrụ.
Ọtụtụ na-ejikọta ọnụ ọgụgụ a na onye njikwa obodo, ha ziri ezi, mana ọ na-elekwasị anya na ahịa ịntanetị. Ugbu a gịnị ọkachamara ọkachamara ị chọrọ onye chọrọ ịrara onwe ya nye ọrụ a? Taa, anyị ga-eleba anya n’ihe kacha mkpa.
1 Kedu ihe njikwa ecommerce
2 Ọrụ nke njikwa ecommerce
3 Ndị ọkachamara ọkachamara nke njikwa ecommerce
3.1 Nwee akọ na omume
3.2 Nwee nkà nkwukọrịta
3.3 Bụrụ onye ndu
3.4 Ike ichikota
3.5 Ọkachamara ọkachamara: Ọhụụ dị mkpa
3.6 Ego, lọjistik, akuku ihe omuma ...
3.7 Ọkachamara ọkachamara: Bụrụ ihe okike na ọhụụ
Kedu ihe njikwa ecommerce
Onye njikwa ecommerce bụ ọkachamara onye na-ahụ maka ijikwa na iduzi ecommerce, ma ọ bụ ụlọ ahịa dị n'ịntanetị. Maka nke a, ọrụ ya dabere na nghọta, ijikwa na ịchịkwa usoro ahịa niile, site na mbido (mgbe ọ na-agwa ndị ahịa nwere ike) ruo na njedebe, nke nwere ike ịbụ ire ngwaahịa ma ọ bụ nzaghachi natara.
Iji rụọ ọrụ gị, ịkwesịrị ịma ihe ọrụ gị bụ (ihe anyị ga-ekwu maka ntakịrị n'okpuru), yana ọkachamara ọkachamara ịchọrọ ịzụlite.
Ọrụ nke njikwa ecommerce
Dị ka ọ dị na onye njikwa obodo, ecommer manager na-arụ ọrụ dịgasị iche iche, ha niile lekwasịrị anya na ebumnuche kachasị, nke bụ ire ngwaahịa, ọrụ ... na ọ kwesịrị. Yabụ, n'etiti ọrụ ya bụ:
Zụlite atụmatụ maka azụmaahịa dị n'ịntanetị.
Mụọ ngalaba nke ụlọ ahịa dị n'ịntanetị.
Hazie ngwa agha.
Mee usoro SEO iji dozie ecommerce.
Mepụta atụmatụ ịre ahịa n'ịntanetị.
Nyocha ọnụ ọgụgụ.
Mepụta ntughari ntughari (iji nweta ndị ahịa ọzọ ma mee ka ha zụta).
Meziwanye ahụmịhe onye ọrụ na iji ụlọ ahịa dị n'ịntanetị.
Chọta onye na-eme ihe a niile siri ike, ọkachasị ebe ọ nwere ike ịdị mfe, mana ọ bụghị. Agbanyeghị, ozugbo ịchọta onye dị mma, ọkachamara gị ga-ekwu maka onwe ha (yana nsonaazụ ndị ị ga-enweta site na ọrụ ha).
Ndị ọkachamara ọkachamara nke njikwa ecommerce
Ozugbo ị matara ihe onye njikwa ecommerce bụ na ihe ọ bụla ọ na - eme (ya bụ, ọrụ ya), ị kwesịrị ịma na ọ bụghị mmadụ niile nwere ike ịrụ ọrụ a. Eziokwu bu na onwere ikike di iche iche aghaghi idi. Nke ahụ bụ ihe anyị ga-atụle ugbu a.
Nke ahụ bụ, bụrụ onye njikwa ecommerce ọkachamara ị ga-emerịrị ya:
Nwee akọ na omume
Ha dị ka otu okwu. Na otutu oge, eji ya eme ihe n’amaghi na ekwuputaghi otu nkebiahiriokwu. Mana ha abụọ dị mkpa maka njikwa ecommerce.
Iji mee ka o doo gị anya, akọ bụ talent, nka i gha eme ihe (na nke a, ka i re onye ozo ihe obula).
N'aka nke ọzọ, Àgwà na-ezo aka n'omume mmadụ, nke ahụ bụ, otu ị si akpa àgwà n'ọnọdụ dị iche iche (ọ bụrụ na ụjọ na-atụ gị, ọ bụrụ na ị dị mma, ọ bụrụ na ị na-ebunye agụụ maka ihe ị na-ekwu ...).
N'ikwu ya n'ụzọ ọzọ, onye njikwa ecommerce ga-enwerịrị ike ire ihe onye ahịa ya nwere: ọrụ, echiche, ngwaahịa ... Ya mere, ọ dị mkpa na ha nwere ọtụtụ ihe ọmụma banyere mpaghara ahụ, yana ọhụụ azụmahịa iji nweta uru nke ohere iji nweta ahịa.
Nwee nkà nkwukọrịta
Were ya na ị bụ onye njikwa ecommerce nke ụlọ ahịa dị n'ịntanetị. Ha na-arịọ gị ka ị ree ngwaahịa. Agbanyeghị, ịnweghị ike, n'ihi ihere gị, ịmekọrịta mmekọrịta n'etiti ndị ahịa, ọbụnadị ịgwa ha na ị nwere ngwaahịa ha na-achọ. N'ikwu ya n'ụzọ ọzọ, ị tufuru onye ahịa ahụ.
Onye njikwa ecommerce enweghị ike ị nweta ego ahụ. Ndi mara ihe ị ga-ekwu, otu esi ekwu ya na onye ị ga-agwa iji nweta ezigbo nsonaazụ. Ma ọ bụghị ya, ị gaghị enwe ike ịrụ ọrụ gị nke ọma.
Bụrụ onye ndu
Ee ee, ị nwekwara nwee ike iduru otu egwuregwu, ọ bụrụ na inwere ya, ma ọ bụ ikpughe mkpa gị na ka ndị ọzọ ju ha afọ iji rụọ ọrụ ha. Ma ọ bụ na, ọtụtụ oge, nke a dị mgbagwoju anya iji mepụta, karịa maka otu onye, ​​ma enwere mgbe niile ọtụtụ ndị ga-abanye (na ọkachamara a ga-ahazi).
Ya mere, ikike ime mkpebi, ijikwa nsogbu, ma ọ bụ ịkwali, dị ezigbo mkpa n'okwu a.
Iji maa atụ, chee na ị bụ ecommerce manager nke otu ụlọ ọrụ, mana ngalaba mgbasa ozi (foto, vidiyo…) na-achịkwa ngalaba ọzọ. Ọ bụrụ n’ịchọrọ ọrụ ahụ ha ga-arụ iji rụọ ọrụ gị, ị ga - ahazi ha ma mata ihe ị ga - arịọ, mgbe na otu esi eme ya.
Ọkachamara ọkachamara: Ọhụụ dị mkpa
Ọ bụrụ na ị bụghị onye maara ihe ugbu a na ọdịnihu nke mpaghara gị, mgbe ahụ ị ga-enwe nsogbu. Ihe kachasị mkpa na azụmaahịa bụ imeghari na ngalaba nke ị na-arụ ọrụ. Yabụ, mara otu esi agbanwe ihe ma mee ka ụlọ ọrụ tụgharịa na-agbaso usoro dị adị.
Dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na ị nwere azụmahịa ịkwa nkà, ị maara na ugbu a ndị a na-apụ n'anya, mana a ka nwere ndị maara otú ha ga-esi gbanwee ma gbanwee azụmahịa ha maka nke na-arụ ọrụ n'ezie (dịka ọmụmaatụ, ịgbanwe ndị ahịa ha n'ọkwá dị elu, ma ọ bụ ịmecha okomoko, wdg).
Ego, lọjistik, akuku ihe omuma ...
Anyị agaghị agwa gị na ị ga-abụ ihe ịtụnanya ma mara ihe niile. Mana enwere ụfọdụ ihe omuma nke na emetuta oru na nke ị ghaghi iburu n'uche. Ya mere, ọ dị mkpa ka ị zụọ ha.
Dịka ọmụmaatụ, na mpaghara ego, ị ga-ahụrịrị na azụmaahịa gị ga - adịgide, ya bụ, na ị ga - amata gbasara echiche ego iji mee mkpebi, ma gbochie ọnọdụ ihe egwu, ma ọ bụ duru ụlọ ọrụ ahụ n'ụzọ ịga nke ọma.
Ọkachamara ọkachamara: Bụrụ ihe okike na ọhụụ
Nke a bụ ma eleghị anya akụkụ dị oke mkpa nke ọrụ ahụ dị ka njikwa ecommerce, yana otu n'ime ọrụ ndị ọkachamara ị kwesịrị iji kpọrọ ihe. Ọ bụ otu ga - eme ka ị dị iche na ụlọ ọrụ ndị ọzọ ma dọta ndị ahịa.
Ya mere, a na-ekwu na ọkachamara ga-enwerịrị uche okike, na-elezi anya nke ọma ma na-agbasi mbọ ike banyere ihe ịma aka, na mgbakwunye na ịkọwa echiche na inwe ọhụụ dị iche na ndị ọzọ (n'echiche na ha na-ahụ echiche nke ndị ọzọ echeghị).
Pathzọ zuru ezu na edemede: ECommerce ozi ọma » eCommerce » Ọzụzụ ECommerce » 7 ọkachamara ọkachamara nke onye njikwa eCommerce ga-enwerịrị
Kedu ihe njikwa ngwaahịa
Kedu ihe Googlezụ ahịa Google na kedu ka ọ si arụ ọrụ